Sida Looga Faa'iidaysto Hashtags-ka Ugu Badan Si Aad U Wanaajiso Waxa aad ka kooban tahay YouTube - YTpals
Sida Looga Faa'iidaysto Hashtags-ka Ugu Badan Si Aad U Wanaajiso Waxa aad ka kooban tahay YouTube
Dad badan ayaa tixgeliya in farsamooyinka hagaajinta mashiinka raadinta kaliya lagu dabaqi karo bogagga shabakadda. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa ka fog runta, sida ayna search engine Farsamooyinka waxaa lagu isticmaali karaa madal kasta. Hashtagyada YouTube-ka waxay u adeegaan sidii shay lagama maarmaan u ah hagaajinta dadaalka raadinta raadinta. Marka si wax ku ool ah loo isticmaalo, hashtaggu waxay kaa caawin karaan hubinta in waxa ku jira fiidyahaagu ay sare u qaadaan natiijooyinka raadinta.
Sannadkan, YouTube waxay soo saartay muuqaal cusub oo la yiraahdo The hashtag bogga natiijooyinka raadinta. Sifadan waxa ay ujeedadeedu tahay in lagu wanaajiyo ku habboonaanta natiijooyinka raadinta daawadayaasha. Iyadoo isticmaalayaashu ay ka raadin karaan fiidiyowyada goobta iyagoo isticmaalaya hashtags hore, sidoo kale, qaabka cusub wuxuu bixiyaa natiijooyin gaar ah. Algorithmamka YouTube si cad uma go'aamin natiijooyinka raadinta ee ay bixiso bogga natiijada raadinta hashtag cusub. Cusboonaysiintan, kanaalo badan ayaa heli doona fursad lagu ogaado goobta haddii ay si hufan u isticmaalaan hashtags. Markaa sidee ayaad u isticmaali kartaa hashtags si aad u wanaajiso nuxurkaaga? Aan ku quuso.
Hashtags-ka YouTube-ka waxa loo qaybin karaa afar nooc oo kala duwan –
Hashtag gaar ah: Kuwani waxay ka kooban yihiin hal eray oo hashtags ah oo tilmaamaya dulucda muuqaalka.
Hashtag qeexan ama isku dhafan: Kuwani waxay ka kooban yihiin hashtag kelmado badan sida ereyada muhiimka ah ee daba-dheer. Habka ugu fiican ee lagu heli karo calaamadaha isku dhafan ee fiidyowgaaga waa adiga oo isticmaalaya natiijooyinka la soo jeediyay ee baararka raadinta.
Hashtag guud: Kuwani waxay ka kooban yihiin weedho ama kelmado qeexaya dulucda fiidyaha.
Higaada khaldan: Inta badan, daawadayaasha ayaa laga yaabaa inay qaldaan erayada marka ay raadinayaan fiidiyowyo. Waxa kale oo aad ku dari kartaa khaladaadka higaada si aad u abuurto hashtag cusub, taas oo kordhinaysa fursadahaaga in lagu ogaado goobta.
Sidee loogu daraa hashtags fiidiyowyadaada?
Hashtags asal ahaan waa ereyo qeexan oo lagu dari karo fiidiyowyadaada YouTube-ka si loo kordhiyo muuqaalka macluumaadkaaga natiijooyinka raadinta YouTube. Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay si fudud u helaan fiidiyowyadaada. Waa lama huraan inaad si wax ku ool ah u isticmaasho hashtagyadan si aad u ballaadhiso gaadhistaada goobta. Algorithm-ka YouTube wuxuu isticmaalaa hashtags si uu u kala saaro iyo darajo khuseeya fiidyahaaga. Isticmaalka hashtag-yada si wax ku ool ah waxay noqotay mid aad muhiim u ah bogga natiijooyinka raadinta hashtag cusub.
Waxaa jira saddex siyaabood oo kala duwan oo hashtags loogu daro YouTube-
In sharaxaadda video
Xagga sare ku xusan ciwaanka: Saddexda hashtag ee ugu horreeya ee la geliyo sharraxaadda fiidiyowga ayaa halkan lagu soo bandhigay
Cinwaanka: Tan waxa loo isticmaali karaa halkii laga muujin lahaa hashtagyada ka sarreeya ciwaanka.
App-ka moobilka ee YouTube-ka waxa kale oo uu kuu ogolaanayaa inaad ku darto summada goobta fiidyaha lagu soo bandhigay ciwaanka fiidyaha. Calaamadaha goobtan inta badan ma laha calaamada xashiishka (#).
In kasta oo aysan jirin xad xaddidan tirada hashtags ee lagu dari karo fiidiyow kasta, waxaa jira xaddidaadyo xarfaha. Ugu badnaan 30 xaraf ayaa loo isticmaali karaa tag kasta. Goobta qoraalka ee sharaxaadda fiidyowga waxay aqbashaa ilaa 500 oo xaraf, oo ay ku jiraan kala-soocida.
Talooyin qiimo leh oo lagu darayo hashtags fiidiyowyadaada
1. Tixgeli habaynta: Markaad ku darto hashtags si kor loogu qaado macluumaadkaaga, waa lama huraan in la dhigo hashtagyada xudunta u ah bilowga hore. Tani waxay u oggolaanaysaa algorithm-ka YouTube inuu helo oo u kala saaro fiidyahaaga si fudud.
2. Ku darista hashtag aad u badan: Waa inaad ka fogaataa inaad ku darto hashtag badan oo fiidiyoow ah. Markay noqoto, waxay kaa caawinaysaa kordhinta muuqalka fiidiyowyadaada daawadayaasha.
3. Samee calaamadaha caadiga ah: Waxaad qeexi kartaa calaamadaha caadiga ah ee lagu daray dhammaan fiidiyowyadaada. Calaamadaha caadiga ah ayaa kaa caawin kara kordhinta muuqaalka macluumaadkaaga natiijooyinka raadinta.
4. Isticmaal qorsheeye erayga muhiimka ah: Qalab badan oo kelmado-fureed ah ayaa kaa caawin kara raadinta hashtagyada isbeddelaya. Waxaad isticmaali kartaa qalabkan si aad u hesho liis wanaagsan oo hashtag ah oo waxtar leh.
Si aad aragtiyo badan uga hesho YouTube oo aad u hubiso kobaca kanaalkaaga YouTube, waa lama huraan inaad si hufan u isticmaasho hashtagyada. Isticmaalka talooyinka kor ku xusan, waxaad kordhin doontaa fursadahaaga inaad sare u qaaddo natiijooyinka raadinta. Waxa kale oo aad ka caawin kartaa kobaca kanaalkaaga adiga oo isticmaalaya adeegyo kala duwan oo YouTube-ka qaali ah oo ay bixiso YTpals. Adeegyadan ayaa ku siin kara aragti lacag la'aan ah YouTube, jecel yahay, iyo macaamiishu, taas oo u fiicnaan karta bilaabista koritaanka kanaalka cusub.
YTpals waxay dammaanad qaadaysaa 100% badbaadada dhammaan adeegyada YouTube, markaa macaamiishu maaha inay ka welwelaan sirnimadooda. Adeegeena macmiilka ee 24/7 ayaa sidoo kale halkan u jooga inuu ka jawaabo su'aalo kasta oo aad qabtid. Si aad uga faa'iidaysato mid ka mid ah adeegyadayada YouTube-ka qaaliga ah, nala soo xidhiidh maanta!
Sida Looga Faa'iidaysto Hashtags-ka Ugu Badan Si Aad U Wanaajiso Waxa aad ka kooban tahay YouTube waxaa qoray YTpals Writers, 14 January 2022
Waxaa jira maqaallo iyo baloogyo aan la tirin karin oo kula tali abuurayaasha YouTube-ka inay si joogto ah u dhejiyaan fiidiyowyada iyagoo ku dheggan jadwalka dhejinta. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan macluumaad badan oo ku saabsan sida abuuraha macluumaadka u abuuri karo dhajinta…
Sidee looga Faa'iidaystaa Muuqaalka 'VR' ee YouTube-ka ee Abuurista Mawduuc
VR wuxuu caan ka ahaa jiilasha soo koraya, waa waqtigii ugu sareeyay shirkadaha sidoo kale bilaabeen maalgashiga. VR weligeed lama helin wax la heli karo oo waa aalado hawlgal sare leh oo markii si wanaagsan loo hirgeliyo sameyn kara…
5 Qaladaadka Caadiga ah ee Jaangooyooyinka Cusub ee YouTube Ay Sameeyaan
YouTube waa wax ka badan oo keliya barxad lagu wadaago fiidiyowyada- waa meel ay ka bilaabatay shaqooyin badan. Laga soo bilaabo heesaha ilaa majaajiliisteyaasha ilaa saamileyaasha, noqoshada 'YouTuber' waxay dad badan u keentay guul ballaaran iyo and